बिहे गर्दागर्दै बेहु’लीको मृ’त्यु ! – Sanchar Patrika
बिहे गर्दागर्दै बेहु’लीको मृ’त्यु !
July 9, 2020 218
नयाँ दिल्ली – भारतको उत्तर प्रदेशमा भइरहेको एक बिहेमा बेहुलीको मृ’त्यु भएको छ । यो घ’टना कन्नौज जिल्लाको हो । उक्त जिल्लामा बि’हे गर्दागर्दै बेहुलीको मृ’त्यु भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।बेहुला सञ्जय शुक्रवार रा’ति आफ्नो परिवारका साथ वि’नि’तालाई लिन पुगेका थिए । बिहेका बेला १९ वर्षीय विनिताले असहज मह’सूस गरिन् र बेहोस भइन् ।
उनका परिवारले वि’निता’लाई लिएर अस्पताल पुगे । तर, अस्पतालले भने कोरोना नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र ल्याउन भन्दै भर्ना गर्न मानेन ।विनिताका पिता कानपुर पुगे । तर, त्यतिबेलासम्म हालत बिग्रिसकेको थियो । समयमा उपचार नपाएर उनको ज्या’न गयो ।क’न्नौज प्रह’रीले मृ’तकको शव पोस्टमार्टमका लागि पठाएका छन् भने घ’ट’नाबारे अ’नुसन्धान भइ’रहेको छ ।
Prevहेलिकप्टर लिएर सिन्धुपाल्चोकमा बाढी गएको स्थानमा जाँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा
NextBreaking…लकडाउनमा क’डाइ : को’रोना जो’खिम बढेपछि सम्पूर्ण व्यवसायहरू बन्द गरिने